Mvura Kwavose - Kitchenware.com
Asi vanhu vakawanda munyika havakwanisi kugadzikana. Zuva roga roga, nezveHNUMX 1 vana vanorwara nezvirwere zvinokonzerwa nemvura isina kuchengetedza uye kusachena kwetsvina. Icho chokwadi hachifaniri kunge chiri mu 2018 ...
Kune mhinduro dzakajeka dzakadai semiti yakatsvaira, vatsigiri vemazuva uye BioSand filters dzinobatsira kupa mvura yakachena kumarudzi ose munyika. Ndicho chaizvo izvo sangano reCharityWater rinoita.
Nzvimbo yako www.outilsdecuisine.com akasarudza kushandiswa mune izvi uye kutsigira CharityWater kupa mvura yekunwa kune vose.
Kwete link per se (kwete kubatana), asi munhu wose anoziva kuti kubika mvura inokosha!
Saka chokwadi tose tine zvakasiyana mari, isu tose tine zvikwereti mari, mazororo kugovera vana vedu (nokuti vaya vanokwanisa), kutanga isu tose tifunge isu uye zvakatipoteredza vasati kufunga vamwe, asi kunyange kana tikakwanisa kupa ma euro mashoma, tinofanira kuzviita! Ihwo hahuzoshanduki hupenyu hwedu asi huchachinja hupenyu hwevanhu vazhinji kune imwe nzvimbo munyika ...
>> 5% yehuwandu hwehutano hwega wega hunoiswa panzvimbo yedu inopiwa kune Charity Water.
100% mari vakatumira Charity Water ichashandiswa kuvaka mvura mapurojekiti, uye pavanenge vapedza, CharityWater titumirei mapikicha uye GPS anoona saka tinogona kuona kuti isu vakabatsira, zvose pamwe chete (kazhinji 21 mwedzi mushure mekuguma kwemushandirapamwe, uye hongu hazvisi kuvaka zvakadaro sechesi!). Kuti uwane pfungwa iwe unogona kutarisa pamepu yemapurogiramu akatozadziswa (https://www.charitywater.org/our-projects/completed-projects/).
Merci kuti atore nguva yekuverenga kwandiri, uye kuti apiwe nekuda kwechikonzero ichi (kuburikidza nekuraira kwako), ndinokutendai nokuda kwekubatsira kwako uye humunhu.
Kana iwe uine mibvunzo usanonoka kutisangana nesu udza mashoko.
Kuti udzidze zvakawanda pamusoro peCharityWater, unzwisise basa rayo uye remvura, tarisa vhidhiyo iyi:
Dzvanya pano kuti udzidze zvakawanda nezveChirity Water uye ugovapa mupiro zvakananga.